Mas labo caruur ah ku dilay gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMas labo caruur ah ku dilay gobolka Sanaag
May 13, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Aaska caruurta uu masku qaniinay. [Isha Sawirka: Facebook]
Garoowe-(Puntland Mirror) Mas ayaa labo caruur ah ku dilay deegaan miyi ah oo u dhow magaalada Xiingalool ee gobolka Sanaag.
Labada caruurta oo ahaa shan jir iyo todobo jir ayaa hurday gudaha aqal Soomaali habeenimadii Arbacada markii maska sunta badan uu u yimid uuna qaniinay, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Lama helin weli maska caruurta laayay balse waxaa loo maleynayaa in uu ka soo baxay duurka.
Caruurta ayaa maanta aas loogu sameeyay deegaankii ay ku dhinteen.
Qaniinyada masaska ayaa dad badan u geeriyoodaan gudaha Soomaaliya sanad walba, gaar ahaan xilliyada kuleylaha oo masaska iyo dhammaan xamaaratadu ay ka soo baxaan godadkooda.